स्वास्थ्य - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्योः मतदानका दिन कोरोना खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन बैशाख ३० गते कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै खोप अभियान सञ्चालन नगर्न जनाएको हो। सबै कर्मचारी मतदान गर्न जानु पर्ने भएकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयले सबै मतदाताले मतदानका क्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको […]
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस नेपाल आउँदै
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउने भएका छन् । वैशाख ८ देखि १० गतेसम्म हुने भ्रमणको क्रममा महानिर्देशकका साथ डब्ल्यूएचओको दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनम खेत्रपाल र डब्ल्यूएचओका अन्य अधिकारीहरू पनि नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल […]
काठमाडौं । सरकारले आजदेखि देशरभर देशभर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ७५३ वटा पालिकाबाट वैशाख आज र भोलि (बुधबार) राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रमको रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । देशभरबाट २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख ९३ […]
१८ बर्षभन्दा माथिका ९० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाको पूर्ण खोप दिइएको सरकारको दाबी
काठमाडौं । १८ बर्ष भन्दा माथिका ९० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइएको सरकारले दाबी गरेको छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दाबी गरेको हो। २०७८ चैत मसान्तसम्म १८ वर्षमाथिको सबै जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूर्ण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए। उनले […]
महिलामन्त्री रेग्मी अस्पताल भर्ना
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी अस्पताल भर्ना भएकी छन् । टाउकोमा चोट लागेपछि मन्त्री रेग्मीलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल भर्ना गरिएको हो । मन्त्री रेग्मी सुत्ने क्रममा टाउको अकस्मात भित्तामा ठोक्किएर चोट लागेको थियो । टाउको ठोक्किएसँगै ज्वरो आउने र टाउको अत्यधिक दुख्ने समस्या भएपछि उनी एक हप्तादेखि मन्त्रीनिवास ललितपुरको पुल्चोकमा […]
७५ लाख बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाइँदै
काठमाडौं । १५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेरका ७५ लाख बालबालिकालाई आजदेखि टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाइँदैछ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका अनुसारका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार गाभी (खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल)ले नेपाललाई निःशुल्क टाइफाइड खोप उपलब्ध गराएको हाे । खोप अभियानअन्तर्गत देशभर ५६ हजार ४२९८ खोप केन्द्र र विद्यालयमा खोप लगाइनेछ । यसका लागि १० हजार स्वास्थ्यकर्मी र […]
कनकाईको मेयरमा एमालेका पोखरेल निर्वाचित
झापामा राप्रपाको पहिलो जित, हल्दिवारीको अध्यक्षमा लिङ्देन, उपाध्यक्षमा मैनाली विजयी
हल्दीबारी ४ मा राप्रपाको प्यानल नै विजयी
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि
भद्रपुरको मेयरमा कांग्रेसका पोखरेल फराकिलो मतले अगाडि
हल्दीबारीको अध्यक्षमा राप्रपाका लिङ्देनको फराकिलो अग्रता, एमालेका गिरी भन्दा १५०६ मतले अगाडि
एमालेले तीनथरी मतदातासँग माग्यो मत
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले तीनथरी मतदातासँग मत …
बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो, आयकरको सीमा बढाउन सुझाव
काठमाडौं । बजेट भाषणको समय नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र …
बल्ल उठ्न थाल्यो काठमाडौंको फोहोर
काठमाडौं । स्थानायबासीका अवरोधका कारण १४ दिनदेखि अवरुद्ध फोहोर ढुवानी …
संविधानको उपेक्षा गर्दा महिलाको उम्मेदवारी कम
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ …
विश्व घटनाः हिटलरले आत्महत्या गरेको दिन
तीन चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्री ६ महिनापछि पृथ्वीमा अवतरण
संसदबाट विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान पदमुक्त
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद्‌ पुन:स्थापनाको फैसला बदर
श्रीलंकामा जारी संकटकाल खारेज
भरतपुरको मेयर काँग्रेसले पाउनुपर्छ, अन्य पालिकामा तालमेल हुन्छ : चितवन काँग्रेस सभापति (अन्तर्वार्ता)
किसानलाई बाख्रा बाँडन पनि सेटिङ, आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाइँदै
वीरगन्जमा पनि बर्डफ्लु
मिक्लाजुङमा गएराति बम बिस्फोट, अर्को पनि शंकास्पद बस्तु भेटियो
बुधबार साँझ बुटवलमा बम बिस्फोट